विद्युत् क्षेत्रमा कुलमान घिसिङले फेरी फड्को मार्दै ! अर्को बर्ष देखि विद्युत् निर्यात गर्ने – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/विद्युत् क्षेत्रमा कुलमान घिसिङले फेरी फड्को मार्दै ! अर्को बर्ष देखि विद्युत् निर्यात गर्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने चरणमा पुगेको बताएका छन् । उनले अर्को वर्षबाट नेपाल विद्युत् निर्यात गर्ने देशका रुपमा परिचित हुने जिकिर गरे